Muxuu Cabdikariim Guuleed ka yiri doorashadii ka dhacday Afisyoone ee guddiga Somaliland? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Muxuu Cabdikariim Guuleed ka yiri doorashadii ka dhacday Afisyoone ee guddiga Somaliland?
Muxuu Cabdikariim Guuleed ka yiri doorashadii ka dhacday Afisyoone ee guddiga Somaliland?
Madaxweynihii hore ee Galmudug, ahna musharax madaxweynaha Soomaaliya, Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa soo dhoweeyey doorashadii maanta ka dhacday Afisyoone ee guddoomiye ay ku doorteen garab ka mid ah guddiga doorashada xildhibaanada Somaliland.
Guuleed ayaa sidoo kale amaanay dadaallada ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadan xal u helidda khilaafka hareeyey siyaasiyiinta Somaliland ee ku aaddan guddigan.
“Shaki kuma jiro in doorashadu ay u baahneyd isla ogol iyo isku tanaasul waxaana cad in dadaal badan lagu bixiyey sidii doorashada gobalada waqooyi ee Somaliland ay u noqon laheyd mid dheelitiran,” ayuu yiri Cabdikariim Guuleed.
“Waxaana hubaal ah in Raisu Wasaare Rooble uu waqti iyo juhdi dheer galiyey ka miro dhalinta arinkaas. Haddaba waxaan soo dhaweynayaa tilaabada horay loo qaaday. Anigoo soo jeedinaya in waxii dhameystir iyo dib u saxid u baahanna howsha lagu dhex saxo,” ayuu yiri.
Doorashadaas, oo ay qaadaceen garabka guddiga ee taageersan guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa waxaa taageeray ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Previous articleXulka Qaranka Brazil Oo Garaacay Xulka Spain Final-ka Ciyaaraha Kubada Cagta Ee Ciyaaraha Olympic-da – Banaadirsom
Next articleChelsea Oo Inter Milan Kala Heshiisay Saxiixa Romelu Lukaku – Banaadirsom